डसेपछि मौरी किन मर्छ ? | Tungoon
काठमाडाैं । मौरीले डसेपछि त्यसको खील हाम्रो शरीरमा गाडिन्छ र हामीलाई अति पीडा हुन्छ । अर्कोतिर, हामीलाई डस्ने मौरी पनि बाँच्दैन । अर्थात्, डसेपछि मौरी पनि मर्छ । त्यसरी, कसैलाई डसेपछि मौरी किन मरेको होला ? के त्यस्को ज्यान नै त्यसको खीलमा हुन्छ ? हाम्रो मनमा यस्तो जिज्ञासा उठ्नु स्वभाविकै हो ।
मौरीको पेटको पुछारमा खील र त्यसलाई ढाकेका अन्य अंगहरु हुन्छन् । मौरीको त्ये खील अत्यन्तै जटील चीज हो । किनभने मौरीले त्यही खीलले शत्रुलाई आक्रमर्ण गर्छ । अर्कोतिर त्यो खीलले मौरीलाई अण्डा पार्न पनि मद्दत गर्छ । उपयोगिता हेर्ने हो भने, मौरीको उक्त खीलको काम नै अण्डा पार्नु हो ।
मौरीको खील काँडा जस्तो हुन्छ । तीनवटा टुक्रा मिलेर बनेको खीलको बीचमा नली जस्तो हुन्छ र यो खील दुईवटा अति संवेदनशील, औंला जस्तो अंग (Projection) हुन्छ । त्यसै अंगको मद्दतले नै मौरीले आफुले डस्न चाहेको ठाउँमा आफ्नो खील भएको अंग परे–नपरेको थाहा पाउँछ ।
Previousनायिका अनुष्का एकाएक इन्टरनेटमा भाइरल
Nextजब ५५ वर्षिय ससुराले ३३ वर्षिय आफ्नै बुहारीसित बिहे गरे
यसकारण समाज कल्याणका पदाधिकारी बर्खास्तीमा परे
महिलाहरुको सेतो पानी बग्ने कारण , लक्षण र बच्चने घरेलु उपायहरु